﻿ कोरोनाबाट एक पटक सङ्क्रमित भएका व्यक्ति ५ महिनासम्म फेरि सङ्क्रमित नहुने
शुक्रबार ०२, माघ २०७७
काठमाडौं । एक पटक कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको व्यक्ति कम्तीमा अर्को पाँच महिनासम्म सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिको तुलनामा एक पटक सङ्क्रमित भएका व्यक्तिलाई फेरि सङ्क्रमण हुने सम्भावना ८३ प्रतिशतले कम हुने पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डको एक अध्ययनले देखाएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दोहोर्याएर हुनसक्ने र अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना भने रहेको बीबीसीको खबरमा छ ।
पुनः सङ्क्रमित भएका केहीमा लक्षण नदेखिए पनि भाइरसको मात्रा ज्यादै धेरै भएको र अरूलाई सार्न सक्ने देखिनु चिन्ताको विषय भएको हप्किन्सले बताए ।
भारतबाट आइपुग्यो १० लाख डोज कोरोनाको खोप
सेनिटाइजरको अधिक प्रयोग खतरनाक !
मधुमेह भएको छ ? आँपको पात उमालेर खानुस्
सुन खानीमा पहिरो जाँदा पाँच जनाको मृत्यु, करिब ७० बेपत्ता